Sidee loo yareeyaa cabbirka dgn / dwg file - Gofumed
Luulyo, 2010 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Waxay dhacdaa haddii aanu haysano feyl badan oo macluumaad badan, tusaale ahaan dgn oo leh 70 layers (heerarka) iyo daqiiqad gaar ah oo aan ku bilowno adoo ka jaraya heerarka qaar si aad u gelisid lakabka kale, faylkii asalka ahaa wali waa isku mid. Xitaa waan tirtiri karnaa dhammaan xogta waana isku mid, inkastoo aysan haysan taariikhda la kiciyay.
Xaaladdan, waxaan haystaa khariirad ah oo ku dhawaad ​​dhammaan macluumaadka degmo, waxay cabbireen 17 MB. Waxaan tirtiray wax kasta oo aan weli cabbirin cabbirka isku mid ah.
Waxaa jira kuwa sameeya inay furaan faylal cusub, tixraac khariidada oo nuqul ka samee Deedka ama la dhoofiyo Deedka Warqada. Faa'iido la'aanta habkan ayaa ah inaad lumin karto taariikhda haddii ay dhacdo in la isticmaalo, waxaad sidoo kale seegi kartaa waxyaabaha lagu farsameeyey faylka dejinta / faylka naqshadeynta.
Sidaa daraadeed habka ugu wanaagsani waa in la siiyo sharraxaad, ereyga waxaa kuqoray qaar ka mid ah asxaabta koorsada sababtoo ah geeddi-socodkan waxaa lagu magacaabaa AutoCAD Nadiifi.
Si loo sameeyo waa la sameeyaa Faylka / cadaadiska. Doorashada Options waxaa loo qaabeeyey in laga saaro, oo ay ku jiraan heerarka aan la isticmaalin, qaababka laynka, qaababka qoraalka, unugyada, iwm.
Marka la doorto Riix waana taas, faylkayga 17 MB-ga wuxuu hoos ugu dhacay 1 MB. Waxa kale oo uu tirtiray walxaha qaar oo u eg jinniyo oo laga arki karo khariidada laakiin lama taaban karo.
Waxaa suurtogal ah in la isku habeeyo Meelaha / goobaha shaqada, iyo doorashada Operation, sidaa darteed markaad ka baxdo Microstation, waxaad ku cadaadisaa faylka.
Faylka> Sawirista Adeegyada> Joogitaanka
Halkan waxaad ku leedahay doorasho faa'iido leh, taas oo muujinaysa waxyaabaha aan la nadiifin karin, oo bixinaya sabab sababta. Si aad u doorto waa inaad isticmaashaa furaha Ctrl.
Post Previous«Previous Microstation Juquraafi: Buugga Tilmaamaha
Post Next Egeomates, photos kaliyaNext »
Hal Jawaab u Jawaab in "Sida loo yareeyo cabbirka dgn / dwg file"
Cenia isagu wuxuu leeyahay:
in version 2016 sideedu u noqon laheyd?